Ukuzonwabisa / ukukhuthazwa-iGeofumadas
Iingcinga kunye neengcamango zomlobi we-geofumadas
U-Esri ubhengeze ukupapashwa kwencwadi kaRhulumente yeSmartter Government: Isikhokelo sokuPhunyezwa kweeveki ezili-14 kuLawulo lweZiphumo ngowayesakuba yiRhuluneli yaseMaryland uMartin O'Malley. Incwadi izisusa izifundo zakhe kwincwadi yakhe yangaphambili, URhulumente oQhelekileyo: Ungazilawula njani iZiphumo kwiXesha loLwazi, kwaye ngokufutshane unikezela ngesicwangciso sokusebenzisana, ekulula ukulandela ...
Yiya eVenezuela ngexesha lokutya
Ndicinga ukuba abanye bayayazi imeko eVenezuela, nditsho kuba ndiyazi ukuba iVenezuela ayililo iziko lendalo iphela, kungoko ke kukho abantu abangayaziyo nokuba iphi. Uninzi lwabo bandifundayo, baziva kwaye bahlupheka yimeko evela ngaphandle, abambalwa bakholelwa ukuba bayayazi into eyenzekayo, benza izigwebo ...
Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Ukushiya iVenezuela ukuya eColombia-iOdyssey yam
Wakhe wawuva umzimba ngaphandle komphefumlo? Ndiyivile mva nje. Umzimba uba yinto ye-inert oziva ukuba uyaphila kuba uyaphefumla. Ndiyazi kufanelekile ukuba kube nzima ukuyiqonda, kwaye ngakumbi nangakumbi xa ngaphambi kokuba ndandithanda ukuzigwagwisa njengomntu oqinisekileyo, ozele luxolo lokomoya kwaye ...
Uphelile unyaka ka-2015. Ukubhiyozela, sikuphathela iifoto ezimbalwa zembali ezisikhumbuza ukuba ixesha alikadluli kulonwabo lwalo. I-LZ 129 Hindenburg, inqwelo moya yohlobo lwe-Zeppelin, yatshatyalaliswa ngumlilo njengoko yayifika eNew Jersey ngoMeyi 6, 1937. Ingozi leyo yabangela ukubhubha kwabangama-36 ...
Zobunjineli, ezintsha, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Imiba emi-6 ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngokudityaniswa kweRegistry- Cadastre
Ukwenza iCadastre kunye neRejista yePropathi yoqobo basebenze kunye ngoku yeyona mingeni inomdla kakhulu kwiinkqubo zokuphucula iinkqubo zamalungelo epropathi. Ingxaki ihlala ifana, nokuba iya ngaphaya komxholo weSpanishi. Kwelinye icala, umbono we ...
cadastre, egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ukuphefumlelwa-Iindlela eziqhubekayo kubuchwephesha be-GIS-ESRI UC kusuku lokuqala
U-2005 ibikokokuqala ndisiya kwiNkomfa yaBasebenzisi be-ESRI, ihlala ikwindawo enye: IZiko leNgqungquthela laseSan Diego, kunye neebhanile ezinkulu ezixhonywe kwiiaringi zendlela ende ecacileyo yeglasi. Ukuqhuma kwiiArabhu ngeendevu ezinamathelayo kunye neebhatyi ezimhlophe, iibrunette ezivela kwilizwekazi laseAfrika ngoncumo ...
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Inkomfa ye-2014 yeNgqalasizinda: Ukuphefumlelwa kwama-Hispanics
Kwiveki ephelileyo iNkomfa yeZiseko zoPhuhliso yonyaka ka-2014 yabanjwa, yaphinda yabanjelwa eLondon, nalapho imbasa eyaziwa ngokuba yi-Inspired ibanjwa nayo. Umnyhadala wawucwangciswe ngakumbi kunamanye amaxesha, usetyenziso lweselfowuni abayileleyo lwe-iOS kunye ne-Android yayiyeyona ibalaseleyo; ngohlaziyo, ...
Microstation-Bentley, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
I-interface yayo ilula, ngaphandle kweebar ezisecaleni, akukho ntengiso, ifom yokukhangela kunye nemenyu engabonakaliyo eneentlobo ezintlanu. Le yindawo esithetha iSpanish UPSOCL, enikezelwe ekwabelaneni ngezinto ezibalulekileyo kwihlabathi. Izinto ezikhuthazayo, izinto ezinomdla, kunye nezinto ekufuneka zibonwe. Its…
Internet kunye neBlogs, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Iingcebiso 5 malunga nokhuseleko yeqela survey
Kwakunzima ukweyisela abaphathi ngelo xesha; izixhobo eziza kuthengwa kufuneka zikhuselwe nge-inshurensi ngokuchasene nokwebiwa, ukonakaliswa kunye neengozi. Kuyaqondakala okokuqala, ngemibuzo efana nale: Ukuba izixhobo ziya kuthi kamva zinikelwe kumasipala, kutheni kungangcono ukuba bahlawulele i-inshurensi? Nxamnye nobusela? Ngaba oku akukuniki mathuba ...
GPS / Izixhobo, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Topography
Namhlanje nje kwiintsuku ezilishumi ezidlulileyo, njengoko uyazi, ndiyekile ukusayina amaphepha ahambelana neprojekthi endigcina ndixakekile kwaye ndikhuthazekile iminyaka esixhenxe. Ngokuqinisekileyo baya kuba belinde inkcazo, kuba kuphela ngabantu abasondeleyo abasaziyo malunga neentsuku ezimbalwa ezidlulileyo, nangona bekucwangcisiwe ukusukela ngala mhla ndagqiba ...
Kanye xa i-nostalgia yokutshintsha imeko iqala ukukrwela ... Ndabelana ngeyona nto ilungileyo endiyibonileyo komnye wabacebisi bam. Njengoko bendingafuni ukukubandakanya kwi-imeyile yokuvalelisa ngokubanzi nakwiziko (uyenye into) ndiyakuxelela ukuba: Ukuba ngu-09: 30 ngoJuni 28, ...
Izicelo zokufunda ngokuvakalayo ngokungathandabuzekiyo ziyayitshintsha indlela esizonwabela ngayo iincwadi. Ngokukodwa, bendihlala ndikuthanda ukonwabela ukuqaqambisa kunye namanqaku esecaleni ngencwadi yokwenyani, ukumisa kunye nokufunda kancinci ukuze ndisebenzise iprozi elungileyo. Kodwa khange ithi qatha kum into yokuba ukuthatha uhambo kunokuba ...
-Sifanele sibe nebhlog ... Wathi umphathi wam (HM), ngamehlo akhe aqhawuliwe kweli hlabathi. Ndaziva ndibuhlungu ngokungalazi igama lokuba indoda eneminyaka engama-73 ubudala yayikhankanyile kwisikhalazo sam esinenkani malunga nokuba kutheni banqamle i-Intanethi koomasipala ababesenza ulondolozo lwecadastral. Ngaphezulu kokutsho ...
Ukurisayikilisha kubusuku bam bodwa eGuatemala, ngoku ukuba ndiza kuya apho ndikushiya nento ukuze uzonwabise. Ndiyazi, ayizalisi i-obsession ngetekhnoloji ... kodwa ikhona. Wayeyintombazana entle enamehlo amnyama kunye neenwele ezithe nkqo ezantsi emagxeni, kwizalamane ezinelungelo labasebenzi besikolo ...
Kule veki bendithetha nomnye woogxa bam, kwaye senze imbali yeminyaka engwevu ekhokelela kwezi nkqubo zophuhliso-eyam ngakumbi kunenkxaso yentloko yakhe. Ndacacisa indlela ukuvela kwezinto eziphazamisayo kundibangele ukuba nditshintshe kwicandelo lobugcisa ndiye kwiNjineli ndize ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ndihlala ndizibuza ukuba ndiza kwenza ntoni xa kufuneka ndifudukele kwidolophu encinci, apho ukufikelela kunxibelelwano esikonwabelayo esixekweni kulinganiselwe. Okungakumbi ngoku ekubeni ii-manias zethu zonxibelelwano ezize ne-Intanethi zisenza sazi ii-imeyile ezintsha, iindaba kwiinethiwekhi zentlalo ...
Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
Kwiminyaka engama-32 kamva, iingcingo ezidibanisa, ukuvala imijikelezo
Olu hambo lweholide lasehlotyeni belungaphezulu kokufumana uxinzelelo. Ayindenzeli mna kuphela, yenzelwe usapho lwam lonke ebelindikhapha. Ngamanye amaxesha isifaniso sokuba iingcingo zixhunyiwe, kubonakala ngathi kuyinyani kwaye kuthatha ixesha lokucingisisa. Ubushushu behlobo ...